Lahatsoratra nataon'i Terri Mock momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Tery Mock
Terri Mock no Chief Reveue Officer ao Ve Interactive, mpamatsy dokambarotra nomerika sy serivisy marketing amin'ny orinasa e-varotra 10,000 XNUMX mahery manerantany. Mock dia manana traikefa mihoatra ny roapolo taona amin'ny naha-mpitantana mpanatanteraka, miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fitarihana ny fitomboan'ny vola miditra, ny famoronana paikady mandeha amin'ny tsena ary ny fanamafisana ny asan'ny orinasa ho an'ny orinasa teknolojia.
Zavatra 4 Ireo mpivarotra dia afaka mianatra avy amin'ny angona ho an'ny Fetin'ny Reny hanatsarana ny fampielezan-kevitry ny Fetin'ny ray
Talata, May 23, 2017 Talata, May 23, 2017 Tery Mock
Vantany vao nipetraka ny vovoka tamin'ny fampielezana ny Fetin'ny Reny dia natodiky ny mpivarotra ho amin'ny fetin'ny ray. Saingy alohan'ny hametrahana amin'ny laoniny vato ny hetsika ho an'ny fetin'ny ray, afaka mianatra na inona na inona ve ny mpivarotra amin'ny ezaka nataon'ny Fetin'ny Reny izay afaka manampy azy ireo hampisondrotra ny varotra amin'ny volana Jona? Taorian'ny fandinihana tsara ny angona momba ny varotra sy ny varotra Fetin'ny Reny 2017 dia mino izahay fa eny ny valiny. Tamin'ny volana nialoha ny Fetin'ny Reny dia nanangona angona avy amin'ny maro ny ekipanay
Zoma, Aprily 7, 2017 Tery Mock